Grace ကျေးဇူးတော် | Calvary Burmese Church
ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်တိုင်း ကျေးဇူးတော် (grace) ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုံးကို နေ့တိုင်းနီးပါး ကြားလေ့၊ သုံးလေ့ ရှိကြပါတယ်။ ကျေးဇူးတော် သက်သက်ကြောင့် နေကောင်း ပါတယ်၊ ကျေးဇူးတော် သက်သက်ကြောင့် အောင်မြင်ခြင်း အခွင့် ရပါတယ်…. စသဖြင့်ပေါ့…. နောက်ပိုင်း သုံးဖန်များ လာတော့ ကျေးဇူးတော် ဆိုတဲ့ စကားလုံးရဲ့ အတိမ်အနက်၊ စစ်မှန်တဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နှလုံးသားထဲမှ တိမ်ကောလု မတတ်၊ ပျောက်ကွယ် လုနီးနီးဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။
တစ်ခါတုံးက ကျမ်းစာကျောင်းတစ်ခုရဲ့ စာချ ပုဂ္ဂိုလ် ပရော်ဖက်ဆာဆရာကြီး တစ်ပါးက ကျောင်းသားတွေကို ကျေးဇူးတော် (grace) နဲ့ပါတ်သက်ပြီး ဘယ်လောက်အထိ နားလည်သဘောပေါက် သလဲဆိုဒါကို လက်တွေ့ကျကျစစ်ဆေးချင်တယ်။ အဲဒါနဲ့ အတန်းတင် (final) စာမေးပွဲ မှာ စစ်ဆေးဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
စာမေးပွဲ မေးခွန်းစာရွက်ရဲ့ အပေါ်ဆုံး အစမှာ၊ မဖြေခင် မေးခွန်း အားလုံး၊ အစအဆုံး သေသေချာချာ ဖတ်ရန်လို့ ရေးသားထားပါတယ်။ မေးခွန်း နံပါတ် (၁) မှ စပြီးဖတ်လိုက်တဲ့ အခါ ကျောင်းသားကျောင်းသူ များအားလုံးရဲ့ စိတ်မှာ တပြိုင်တည်း ခံစားလိုက်ရတာကတော့ ဖြေဆိုရန် အလွန့်အလွန်ခက်ခဲသော မေးခွန်းများဖြစ်တယ်၊ ဖတ်ထား၊ လေ့လာထားခဲ့သမျှသည် ဤပုစ္ဆာများကို ဖြေဆိုရန် မည်သို့မျှ မလုံလောက် ဟူသည့် အချက်များပင်။ မေးခွန်း များကို ဆက်ဖတ်လေလေ ပို၍ ခက်ခဲလေလေ၊ တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားလေလေ ဖြစ်ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ မေးခွန်း၏ နောက်ဆုံးစာရွက်မှာ “အောက်တွင်ရေးသားထားသည့် အချက်ထဲမှ တစ်ခုခုကိုရွေးချယ်ပါ” ဟုရေးသားပြီး ရွေးရန် အချက် ၂ချက် ကိုဖော်ပြထားတယ်။ အဲဒီ အချက် ၂ချက်ကတော့
အထက်ပါမေးခွန်းများကို သင် တတ်စွမ်းသလောက်ဖြေရန်။
အထက်ပါမေးခွန်း များကို ဖြေစရာမလိုပါ ဤ နေရာတွင် လက်မှတ်ထိုးပြီး ထွက်ခွါသွားနိုင်ပါသည်။ သို့ပြုလျှင် ဂုဏ်ထူးမှတ် (A +) ရမည်။
ဤနေရာအထိရောက်အောင်ဖတ်သော ကျောင်းသားအားလုံး ဇဝေဇ၀ါ ဖြစ်သွားကြသည်။ ဘာမှ မဖြေဘဲ ဂုဏ်ထူးမှတ် ပေးမှာလား? ယုံရန် အတော်ခက်ခဲသည်။ ကြိုးစားပမ်းစာ ဖြေလိုက်လျှင် အနည်းဆုံး အောင်မှတ်တော့ ရနိုင်သေးသည်။ ဘာမှ မဖြေဘဲ လက်မှတ်ထိုး ထွက်သွားကာမှ “ဘာမှ မဖြေဒါ ဘယ်လို လုပ် အောင်မှတ်ရမလဲ” ဟုပြောလွတ်လိုက်လျှင် တစ်နှစ်လုံးကြိုးစားခဲ့သမျှ သဲထဲရေသွန်ဖြစ်သွားမည်။ မိတ်ဆွေကော ကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့လျှင် မည်သို့ဆုံးဖြတ်မည်နည်း? ဘာတစ်ခုမှ မဖြေဘဲ ဂုဏ်ထူးရမည်ဆိုလျှင်မရက်ရောလွန်းဘူးလား ဟု မေးစရာရှိသည်။
နောက်ပိုင်းတွင် ပရော်ဖက်ဆာကြီးအား သူ၏ လက်တွေ့ စမ်းသပ်ချက်နှင့်ပတ်သက်၍ ပြန်လည် မေးမြန်းကြရာ ကျောင်းသားကျောင်းသူ များ၏ စာမေးပွဲမေးခွန်း အပေါ်တုန့်ပြန်ချက်ကို အောက်ပါ အတိုင်းရှင်းပြသည်။
အချို့ကျောင်းသား/သူ များဟာ မေးခွန်းအားလုံး ကို အဆုံးအထိ အရင်ဦးဆုံးမဖတ်ဘဲ နံပါတ် (၁) မှ စပြီး ဖြေဆိုကြရာ ဖြေဆိုချိန် (၂) နာရီ လုံးလုံး ချွေး တဒီးဒီး ကျလိုက်၊ ခေါင်းခါလိုက်၊ စဉ်းစားလိုက် မျက်မှောင်ကြုံ့လိုက် ကြိုးစားဖြေကြတယ်။ နောက်ဆုံး ပုစ္ဆာရောက်မှ လက်မှတ်ကလေးထိုး လိုက်ရုံနဲ့ ဂုဏ်ထူးမှတ် နှင့် အောင်နိုင်ကြောင်းသိသွားကြတယ်။
အချို့ကျောင်းသား/သူ များ ကြတော့ ပထမ ၂ ရွက် ကိုဖတ်ပြီး မျက်နာနီရဲလာကာ မေးခွန်းကိုလည်း ဆက် မဖတ်၊ ဖြေဆိုရန်လည်း မကြိုးစားတော့ဘဲ စိတ်ဆိုးမာန်ဆိုး စာမေးပွဲခန်းမှ ထွက်သွားကြသည်။ မေးခွန်းစာရွက် အဆုံးတွင် ကျေးဇူးတော်သက်သက် ဖြင့် ဂုဏ်ထူးဖြင့် အောင်မြင်နိုင်သည့် အခွင့်ရှိကြောင်းမျှပင် မသိသွားကြပါ။
အချို့ကျောင်းသားများကြတော့ မေးခွန်းအားလုံးကို အသေအချာ နောက်ဆုံးအထိဖတ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆရာကြီးက ကျေးဇူးတော်သက်သက်နဲ့ ပေးမဲ့ ဂုဏ်ထူးမှတ် ကို မယုံကြည်လို့လား၊ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်အားကိုကိုးပြီး ရဒါမှ တန်ဖိုးထားချင်ဒါလား၊ ဒါမှမဟုတ် အလကားရတာဆိုပြီးတန်ဖိုးမထားတာလား မသိ. . . စာမေးပွဲကို ကြိုးစားပမ်းစားဖြေတယ်။ မေးခွန်း တွေက အရမ်းအရမ်းခက်ခဲအောင် မေးထားတော့ ကြိုးစားဖြေသူတိုင်း အောင်မှတ် ရရုံလောက် (C) ဘဲရကြတယ်။
နောက်ဆုံးကျောင်းသားတစ်ချို့ကြတော့ ဆရာကြီး ရေးထားတဲ့ နောက်ဆုံးစာတန်းကို အသေအချာ သုံး လေးခါပြန်ဖတ်တယ်၊ သုံးသတ်တယ်၊ ပြီးတော့ စိတ်ချ ငြိမ်သက်ခြင်း နဲ့ဘဲ လက်မှတ်ထိုးပြီး စာမေးပွဲခန်းမှ ထွက်သွားကြတယ်။
ပရော်ဖက်ဆာကြီးအား ထိုကျောင်းသား (၄) မျိုး ၏ အောင်ချက်ကို မေးမြန်းရာ သူသည် ဤကျောင်းတော် ကြီး၏ ဆရာကြီး ပရော်ဖက်ဆာ တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း အတန်းတင်စာမေးပွဲကဲ့သို့ အရေးကြီးသော အချိန်တွင် မိမိပေးသော ကတိကို သိက္ခာမဲ့စွာ ချိုးဖောက်မည် မဟုတ်ကြောင်း၊ ဘာမျှမဖြေဘဲလက်မှတ်ထိုးပြန်ထွက် သောသူ အားလုံးကို ဂုဏ်ထူးမှတ်ဖြင့် ပေးအောင်ကြောင်း ပြန်လည်ရှင်းပြသည် ဟုဆိုသည်။
မိတ်ဆွေ. . . ဘုရားသခင်ဟာ အထက်က ပရော်ဖက်ဆာ ကြီးထက်ပင် ပိုမို၍ ကတိတည်တဲ့ ၁၀၀ % ယုံကြည်အားကိုးလောက်တဲ့ ဘုရားရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ ယော ၃း၁၆ မှာ “ဘုရားသခင်၏သားတော်ကို ယုံကြည်သောသူ အပေါင်း တို့သည် ပျက်ဆီးခြင်းသို့မရောက်၊ ထာဝရအသက်ကို ရစေခြင်းငှါ၊ ဘုရားသခင်သည် မိမိ၌တပါးတည်းသော သားတော်ကို စွန့်တော်မူသည်တိုင်အောင် လောကီသားတို့ကို ချစ်တော်မူ၏။” လို့ ကတိပေးထားပါတယ်။
တဖန် တမန်တော် ၁၅း ၁၁ မှာ “သခင်ယေရှု၏ ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်သာ ထိုသူတို့သည် ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ ရောက်သည်နည်းတူ၊ ငါတို့သည်လည်း ရောက်ရမည်ကို ငါတို့သည် ယုံကြ၏ဟု ပေတရုပြောဆို၏။” ကျေးတော်သက်သက် အားဖြင့်သာ ယုံကြည်သူလူသားများသည် ကယ်တင်ခြင်း ရရှိကြောင်း ကတိတော်ဖြစ်သည်။ ဆက်လက်၍ (ဧဖက် ၂း၅၊ ၂း၈၊ ၂တိ ၁း၉) များတွင်လည်း ကျေးဇူးတော် သက်သက် အားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်း ရရှိနိုင်ကြောင်း ဘုရားရှင်၏ ကတိတော်များကို ဖတ်ရှုနိုင်သည်။
မိတ်ဆွေ. . . ကျေးဇူးတော် ဆိုဒါ မိမိတို့ ရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုကြောင့် မဟုတ်ဘဲ၊ ထိုက်တန်မှု ကြောင့်လည်း မဟုတ်ဘဲ ဘုရားရှင်ထံမှ ကောင်းကြီး ရရှိခံစားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ ကျွန်တော်တို့ ထာဝရ အသက်ရရှိခံစားဖို့ ဘယ်လိုမှ ကြိုးစားလို့ မရပါဘူး။ သခင်ယေရှု ရဲ့ ကျေးဇူးတော်သက်သက် ကြောင့်သာ ရရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်. . . လို့တင်ပြရင်း စာဖတ်သူအပေါင်း ကျေးဇူးတော်သက်သက်အားဖြင့် လောကီရေးရာ၊ ၀ိညာဉ်ရေးရာ စာမေးပွဲများမှာ ဂုဏ်ထူးနှင့် အောင်မြင်သူများဖြစ်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုပါတယ်။
မှတ်ချက်။ Sermon Central website မှ တရားဟောချက်တစ်ခုတွင် ပြောသော ဥပမာ တစ်ခုကို အခြေခံ၍ ဖြည့်စွက်၊ ပြုပြင်ပြီး တင်ပြထားပါသည်။
This entry was posted on July 1, 2011 by thawngno in Article Salvation, Articles Grace, Thawngno and tagged grace, salvation, Thawngno.
84,837 Since July 2011
မိသားစု ကျေးဇူးတော် ချီးမွမ်းခြင်း